लोकल कुखुरापालनले विदेशको पीडा भुल्दै, स्कुले सहपाठी मिलेर संचालन गरेको फार्मवाट मनग्ये आम्दानी | PBM News.com
चितवन २६ असार । स्कुले सहपाठी मिलेर सुरु गरेको लोकल प्रजातिको कुखुरापालनले पूर्वी चितवनमा राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको छ । खैरहनी नगरपालिकाको वडा नं. १० बडगाउँमा तीनजना स्कुले सहपाठी मिलेर व्यवसायिक रुपमा लोकल प्रजातिका कुखुरा पालन गर्दै आएका छन् । सेयर्से कालिका पोल्ट्री फारम स्थापना गरेर डेढवर्ष अघिदेखि व्यवसायिक रुपमा लोकल प्रजातिका कुखुरा पालन थालेपछि उनीहरुको दैनिकी फेरिएको छ ।
खैरहनी नगरपालिका वडा नं. १० का विजय वर्तौला, वडा नं. ८ का सुजन चौधरी र वडा नं. ९ का विक्रम पंजियार यिनीहरु स्कुले सहपाठी हुन । एसएलसी सम्म सँगै पढेर छुटिएका तीनैजना साथीहरुलाई लोकल प्रजातिको कुखुराले फेरि सँगै बनाइदिएको छ । सफल उद्यमीको रुपमा स्थापित हुँदै गएका छन् ।
यस्तो छ यिनीहरुको पृष्ठभुमी –
विजय वर्तौलाः यिनी भारतीय सेनामा कार्यरत्त थिए । भारतीय सेनामा यिनलाई सन्तुष्टि मिलेन, सेवा छाडेर विदेशीए । अवसर खोज्दै पछि फिनल्याण्ड पुगें । केहि समय फिनल्याण्डमा विताए । त्यहाँपनि विजयलाई सन्तुष्टि मिलेन । घर फर्कीए । अहिले कुखुरा फारममा व्यस्त छन् । ‘मलाई सबैभन्दा खुशी अहिले मिलेको छ’ वर्तौलाले भने । घर परिवारँसगै बसेर राम्रो भइरहेको छ ।
सुजन चौधरी – यिनले पूर्वी चितवनमा आइएमई चलाउथें । आइएमई संचालनवाट चित्त बुझेन । विदेश गए, कतारमा चार वर्ष कामगरें । कतार पुगेपछि त्यहाँका तातो हावापानी र अरुको इसारामा बसेर कामगर्नुपर्ने बाध्यता भयो । कतारमा रहदा पनि यिनलाई चित्त बुझेन । चारवर्षपछि बैदेशिक बसाईलाई विटमार्दै स्वदेश फर्कीए । विदेशमा भोगेको पीडालाई स्थानीय प्रजातिको कुखुराले भुलाइदिएको छ । विहानैदेखि बेलुकी अबेर सम्म कुखुराकै रेखेदेख र स्याहार सुसारमा लाग्ने गरेको सुनाए । थोरै परिश्रममा राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएको यिनले सुनाए ।
विक्रम पंजियार – यिनी भूवानी शंकर कलेजमा अध्ययरत्त विद्यार्थी नेता हुन । स्कुले उमेर देखि नै कृषिमा रुचि थियो । पछि यिनले आधुनिक कषि फार्म संचालन गर्न थाले । कृषकहरुले उत्पादन गरेको फसललाई खरिद गरेर बजार सम्म पुर्याउने काममा सक्रिय बनेका थिए । ‘अहिले कृषिमा अझै राम्रो सम्भावना देख्दै गएका छौं ’ यिनले भने ।
यसरी बन्यो योजना – तीनैजना साथीहरु स्कुले जीवनमा खुब मिल्थें । संयोगले धेरै समयपछि चियापसलमा भेट भयो । तीनैजनाले एकले अर्काको हालखबर सोधे । सबैले अब नेपालमै केहि गर्ने इच्छा भएको सुनाए । तर के गर्ने ? कुनै योजना थिएन । पछि सुजनले लोकल प्रजातिको कुखुरा पाल्ने योजना सुनाए । तीनैजनाको मन मिल्यो । कुखुरा पालनका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा जुटे । यो बीचमा धेरै ठाउँका फारममा पुगें । विशेषज्ञहरु सँग सुझाव समेत लिए । योजना राम्रो बन्यो । वडा नं. १० वडगाउँमा रहेको विजय वर्ताैलाकै जग्गालाई भाडामा लिएर कुखुरा पाल्ने निधोमा पुगे ।
कुखुरालाई चाहिने खोर देखि अन्य संरचना बनाउन आफै जुटे । अहिले एकजना कर्मचारी कुखुराको रेखदेखका लागि राखेका छन् । यिनीहरुको फार्ममा विभिन्न प्रजातिका १२ सय कुखुराहरु छन् । खोरमा ५ हजार सम्म कुखुरा थियो । खोरमा भएका कुखुराहरु बिक्री भए, अहिले पानीपर्ने समय भएकाले कुखुराको संख्या कम भएको छ । ५ कट्ठा ५ धुर जग्गामा व्यवसायिक कुखुरा पालन गरेका हुन । अहिले २२ प्रजातिका लोकल कुखुराहरु खोरमा छन् ।
साकिनी, घाँटी खुइले, उल्टेप्वाख, कटकथान, टर्की, सिल्की, इङलिस व्यान्टम लगायतका कुखुराहरु छन् । स्थानीयदेखि विदेशवाट समेत कुखुरा ल्याएर पालिरहेका छन् । अन्य पेशामा भन्दा यो क्षेत्रमा थोरै लगानीले राम्रो मुनाफा हुने विक्रम पंजियारले बताए ।
यिनीहरुले कुखुरा पालनसँगै ह्याचारी समेत संचालन गर्दै आएका छन् । एकपटकमा एकहजार वटा सम्म बच्चा निकाल्न सक्ने क्षमता छ । ह्याचारी सँगै खोरलाई अझै बढाउँने योजना छ । डेढवर्ष अघि १५ लाख रुपैयाँबाट सुरु गरेका थिए । अहिले अन्य खर्च कटाएर ३० लाखको पुँजी जोडन सफल भएका छन् । यिनीहरुले लोकल प्रजातिका भालेपोथी सँगै चल्ला विक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । मासु प्रयोजनका लागि कतिपय स्थानीयहरु खोरमै लिन पुग्ने गरेका छन भने । नजिकैका बजारहरुमा माग आएको बेला डेलिभरी सुविधा दिएका छन् । चल्ला र मासुको माग थेग्न नसक्ने अवस्थामा छन् । विराटनगर सम्मबाट चल्लाको माग आउने गरेको छ । नजिकैका कृषक देखि अन्य जिल्लाका कृषकहरुले माग गरेको चल्ला पुर्याउन हम्मे हम्मे परेको अर्का संचालक सुजन चौधरीले बताए ।
यस्तै चल्लाहरु भने देशका विभिन्न शहर सम्म लैजाने गरेका छन् । पछिल्लो पटक इच्छा कामना गाउँपालिकाले समेत यिनीहरुले उत्पादन गरेको चल्ला किनेर आफ्ना विपन्न नागरिकहरुका आयआर्जनका लागि वितरण गरेको छ ।
निकट भविष्यमा पर्सा बजारमा लोकल हाँस, कुखुराको मासु विक्री वितरणका लागि फ्रेस हाउस संचालन गर्ने योजना छ । यस्तै हाल भएको कुखुराको खोर वरिपरि नै बाख्रापालन गर्ने तयारीमा जुटेका छन् । व्यवसायिक रुपमा उन्नत जातका ब्राखापालन सँगै माछापालनलाई पनि जोड दिने यिनीहरुको योजना छ ।
भीमफेदी–कुलेखानी सडकखण्डमा ६ ठाउँमा पहिरो
भारतीय दूतावासअगाडि प्रदर्शन गर्ने पहाडी लगायतका अधिकारकर्मीहरु पक्राउ
कालिकामा संक्रमित क्षेत्रका स्थानीयको स्वाव संकलन आजदेखि सुरु
ओलीकै सक्रियतामा निर्वाचन आयोगमा एमाले नामको पार्टी दर्ता: प्रचण्ड